မုန့်ငံပြာရည်အတွက်ယုန် - စာရွက်
ယုန် - coveted ဆုဖလား, အရသာရှိတဲ့ဂိမ်း။ အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာ - အချဉ်မုန့်ထဲမှာယုန်။ ဒီယုန်စာရွက်တွင်, သင်တန်း, အဲဒါကိုအိမ်မှာချက်ပြုတ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ဟင်းလျာများနှင့်အတူ polupohodnyh အခြေအနေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အသားယုန် ပြည်တွင်းယုန်၏အမဲသားကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသောအချို့သောလမ်းအတွက်သို့မဟုတ်ရိုင်းယုန်, ကအမြဲခက်ခဲသည်, ထို့ကြောင့်အနည်းငယ်ပိုရှည်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်အပြင်, က pre-ကွိုတငျပွငျဆငျအထူးလမ်းရန်လိုအပ်ပေသည်။
အသေကောင်ကိုယုန် (အအေးငှက်ဇောက်ထိုးငြိမ်ဝပ်စွာနေသို့မဟုတ်3ပတ်ကြာအထိဆွဲထားစေခြင်းငှါ) တစ်ဦးအေးမြအနည်းဆုံးနှစ်ဆယ်လေးနာရီအဘို့ဖြစ်ရမည်။
ထို့နောက်သူက (ဒီ evisceration မတိုင်မီသို့မဟုတ်အပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်) အူနှင့်ယုန်အသားအရေရန်လိုအပ်ပေသည်။
1 သို့မဟုတ်2နောက်ကျောခြေထောက်များအတွက်ယုန် Dangle ။ အစားထိုးကွန်တိန်နာရိတ်သိမ်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်သွေးစီးဆင်းမှုအောက်ထပ်။ ပထမဦးစွာဝမ်းမှဝမ်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အသည်း, နှလုံး, အဆုတ် (ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပိုကောင်းထို့နောက်သီးခြားစီချက်ပြုတ်) ထုတ်ယူပါ။ အဆိုပါ trachea Remove, အစာပြွန်, အစာအိမ်နှင့် sternum အတွက်ထိုအသွေး froze ။
အစွန်းအဘို့ကိုခြေထောက်နှင့်ဦးခေါင်းဂရုတစိုက်ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားနဲ့ဆက်သွယ်မှု pruning တစ်စတော့ရှယ်ယာဟာခြေထောက်နှင့်အတူစတင်သကဲ့သို့, ခွံကိုဖယ်ရှား, Cut ။ အထည်အောက်မှာစုဆောင်းအသွေးတော်မှအသေကောင်ကိုဓါးကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောရုပ်ရှင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အနာစိမ်းရေ (1 လီတာ) parsley အမြစ်များ, 8 မိနစ် Lavrushko, allspice နှင့်လေးညှင်းပွင့အတူ။ အနည်းငယ်အေးမြကြပါစေ marinade ဆားထပ်ထည့်, ရှာလကာရည်နည်းနည်း (1-2 tbsp ။ ဇွန်း) သို့မဟုတ်သံပုရာဖျော်ရည် 1 sagging နှင့်ကြက်သွန်ဖြူ။ ယုန်ကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်သို့နှင့် (တစ်ခါတစ်ရံမှောက်လှန်) တစ်ဦးကွန်တိန်နာ ostyvshim marinade တစ်နေ့၌ထည့်သွင်းထားသည်။ သူ့ကိုအချဉ်မုန့်အတွက်ကအနည်းဆုံး 12 နာရီ (ဖြစ်နိုင်ရင်နေ့စဉ်) အတွက် promarinuetsya သိပ်ပြီးစိုးရိမ်မနေဘူးရှေ့တော်၌ထိုယုန်ကြပါစို့။
မုန့်ငံပြာရည်အတွက်ပြင်ဆင်မှုယုန် - စာရွက်
တစ်ဦး skillet သို့မဟုတ် utyatnitsu အတွက်ချက်ပြုတ်ရန်လွယ်ကူ။
ယုန်, အပိုင်းပိုင်း (အသား underwire) သို့အုပ်စုခွဲ - 1 အသေကောင်ကို;
အချဉ်သဘာဝအထူ - 150-200 ml ကို;
နေဆဲသည်အခြားနံ့သာမျိုး, ခြောက်သွေ့တဲ့ဆန်နှင့် unmilled သမ္မာသတိ;
သေးငယ်သောချဉ်မုန့်ထပ်ထည့်, ကြက်သွန်ဖြူ, ငရုတ်ကောင်းနှင့်ပြီးလျှင် nutmeg အမျိုးမျိုး peeled ကုန်တယ် - တာဟာကြကုန်အံ့။
ပြီနောက်ဟင်းအတွက်ထောပတ်သို့မဟုတ်ရေနံအပူပေးပြီးညင်ညင်သာသာကြော်သို့မဟုတ်ကုန်တယ်ကြက်သွန်နီ passeruem ။ ယုန်ကိုအပိုင်းပိုင်း, လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတင်သော, အပူနှင့်မျှတည်ထားပါလျှော့ချဖို့, ဖြစ်နိုင်သည်တစ်နာရီအဘို့ရေနှင့်နံ့သာသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏ၏ထို့အပြင်အတူရံဖန်ရံခါနှိုးဆော်, အဖုံးပိတ်ပြီး။ လိုအပ်သောလျှင်ယုန်ဖြည့်ပါအခြားမိနစ် 20 မျှတည်ထားပါ, နူးညံ့မှုဖို့ကြိုးစားပါနှင့် မုန့်ငံပြာရည်အတွက် အရသာမရှိသောဖြစ် - နှင့်အနိမ့်အပူပေါ်အခြား 3-5 မိနစ်ခန့်တက်နွေး, ထို့နောက်မဖွစျသငျ့အပူကို turn off နှင့် ပတ်သက်. 10 မိနစ်ပြုတ်မုန့်များအတွက်ရပ်တည်ချက်ပေးပါ။ ယုန်, မုန့်အတွက် stewed, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်မည်သည့်အပါအ (အာလူး, buckwheat, ကုလားပဲ, polenta) နဲ့ဝတ်ပြုကြ၏။ ကောင်းသောလည်းမဆိုပုံစံ, လတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ် Pickled နှင့်စပ်အမဲလိုက် tincture အတွက်မှို file ။
အပိုင်းပိုင်းသို့ဖြတ်ဖို့ယုန်, - 1 အသေကောင်ကို;
အလတ်စားအာလူး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ oblong ဒဏ်ငွေ;
မုန့် - 200-300 ml ကို;
လတ်ဆတ်သောမှိုများ - 200 ဂရမ်;
ဆန့်ကျင်ဘက် peeled အာလူးလည်းနီးကပ်စွာများမှာတစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း form မှာတင်သော (လိုအပ်ပါကဖြတ်ရမည် ကြီးမားသောအချပ်) ။ ဖောဖောသီသီအရည်ပျော်မှုထောပတ်နှင့်အတူအာလူးရေလောင်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလှုပ်။ တစ်ဖြီးနှင့်အတူအရည်ပျော်မှုထောပတ်နှင့်အတူ coated ယုန်ကိုအပိုင်းပိုင်း။ ကျနော်တို့ 1 နာရီများအတွက်မီးဖိုတဖို၌အာလူးနဲ့မုန့်ဖုတ်ပေါ်အသားပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
သီးခြားအချဉ်မုန့်ထဲမှာမှိုချက်ပြုတ်။ ကြော်ထုထို့နောက်ထို့နောက်မုန့်လောင်း, 15 မိနစ်အမှုန့်မှိုနံ့သာမျိုးနှင့် protushivaem add, ကြက်သွန်နီကုန်တယ်။ နှိုးဆော်နှင့် 3-5 မိနစ်ခန့်တက်သည်နွေး။
တစ်ယုန်နီးပါးအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, အညီအမျှလောင်းမှိုနှင့်ကြက်သွန်နီမုန့်ပုံစံအတွက် stewed နှင့်အခြား 20 မိနစ်မီးဖို၌ပယ်စွန့်ခွာ။
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Pita ပေါင်မုန့်
မီးဖို၌ skewers အပေါ်ဝက်သား
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူအေး beetroot ဟင်းချို
အခဲ - ကွဲပြားခြားနားသောအသားသို့မဟုတ်ငါးအရသာဟင်းလျာများအဘို့အချက်ပြုတ်နည်းများ
နွေရာသီ 2013 Wardrobe
အဆိုပါသန္ဓေသား implantation မှာရွေးချယ်ရေး
ကယ်လ်ဆီယမ်ချို့တဲ့ခြင်း - အဘယ်အရာကို hypocalcemia ခြိမ်းခြောက်ခြင်း, ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရသနည်း
"ဟုအဆိုပါနေ့၏ကြယ်ပွင့်နှင့်အတူ။ " Sarah Jessica Parker တို့သင်အကောင်းဆုံးဖိနပ်ကိုရှေးခယျြကူညီပေးသည်
ဆိုဒါ, ဆား, အိုင်အိုဒင်း Gargling
အလွန်အကျွံချွေး - အကြောင်းရင်းများ